Tsvaga yakanakisa misika yeKisimusi muEurope | Kufamba Nhau
Misika yakanakisa yeKisimusi
Susana Garcia | | Kufarira
Kunyangwe tichiziva kuti Kisimusi inotevera iri kure, chokwadi ndechekuti tinoda kufunga nezvenzendo dzatinogona kuita, kunyangwe paine mwedzi mishoma yasara. Ndosaka tichazotaura nezvazvo misika yakanakisa yeKisimusi inogona kuwanikwa muEurope, sezvo iri pakondinendi ino iyo yakanakisa uye yechinyakare kubva kumativi ese epasi inopembererwa.
ari Misika yeKisimusi iri kuwedzera kufarirwa uye mavari unogona kuwana mhando dzese dzezvinhu, asi kunyanya kushongedzwa uye ruzivo rwakanangana neKisimusi uye zvakajairika zvinhu zveKisimusi munyika yega yega. Naizvozvo, kana tiine mukana, hatifanire kumira kuenda kune mumwe weiyi misika yeKisimusi.
1 Colmar, Furanzi
2 Bolzano, Itari
3 Gengenbach, Jerimani
4 Graz, Austria
6 Brussels, Belgium
Iyo Alsace dunhu ine misha inoita senge isiri yenyaya, ichiita kushanya kwakanaka chero nguva. Asi kana iwe uchida kunakidzwa neKisimusi ine yakasarudzika runako, haugone kupotsa iyo Colmar Kisimusi musika. Vagari vakashongedzwa nemwenje weKisimusi kwese kwese. Kufamba mumigwagwa yayo inova chimwe chinhu chemashiripiti. Kune misika yakati wandei yakapararira pamusoro penzvimbo dzakasiyana. Musika weKisimusi weChechi uri muPeople des Dominicain, musika wevadiki uri muPetite Venice. MuPlaça Jeanne d'Arc pane musika une zvakajairika zvigadzirwa uye mumuzinda wekare Koïfhus kune musika wekare.
Uyu medieval rinotarisa guta rinopemberera iyo Chirstkindlmarkt kubva kupera kwaNovember kusvika Ndira 6. Musika uyu uri muPazza Walther uye une zvidyarwa zvidiki zvine zvigadzirwa zveKisimusi. Munguva yemafaro uye pakupera kwevhiki nzvimbo iyi iri kubatikana, semitambo inoitirwa munhu wese akaita sevanyori venyaya, vatambi vejuzi uye nziyo dzeKisimusi. Mumusika uyu mune yakawanda yekushongedza yeKisimusi, asi zvakare inonakidza mazano ezvipo, hunyanzvi uye zvakajairika zvigadzirwa zveayo gastronomy.
Iri rakanaka guta reGerman riri kumadokero chikamu cheBlack Forest. PaKisimusi inowanzo chando, saka iyo showa inogona kutonyanya kunakidza. Iyo Musika weKisimusi uri munzvimbo yeguta horo. Uyu musika une peculiarity yekuti ine iyo hombe yekuuya karenda pasi rose, iyo inoratidzwa pane yekumberi kweiyo taundi horo. Mahwindo anova mazuva ekarenda, mune zvimiro zvinomiririrwa. Iwo musika wakakura chaizvo, une zvinopfuura makumi mana emasturu
Musika mune iri guta unonzi Advent Musika. Muguta rino mweya weKisimusi unoziva zvizere, kunyangwe uchitanga musi waZvita XNUMX, kwete semamwe maguta anotofambisa iro vhiki muna Mbudzi. Ino nzvimbo ine nzvimbo dzinoverengeka dzaunogona kushanyira, pamusoro pekuve neakanaka yeKisimusi yekutenga mamiriro. Mu Hauptplatz, inova nzvimbo huru yeguta, inogara musika mukuru. PaGlockenspielplatz pane musika wakatsaurirwa kune chaiwo zvigadzirwa zvemuno. Musika wekare kupfuura wese muguta iri mudunhu reFranciskaner. Pamusoro pemisika, muchivanze cheLandhaus mune chinoshamisa chiitiko chekuzvarwa chakagadzirwa nechando. Muhororo yeguta ivo vanoita zvakare yakakura Advent kendendari kuitira kuti guta rese rive nekunakidzwa kuverengera kuenda kuKisimusi.
Musika weKisimusi mune rino guta unofungidzirwa seimwe yeakanakisa muSwitzerland yese, zvese muhukuru uye mhando. Izvo zvinoitika mu Barffüsserplatz uye Münsterplatz square. Iri guta rine guta rakanaka rekare iro rakashongedzwa panguva yeKisimusi yekugamuchira vashanyi. Iwo matafura akanaka mumakwere anomira kunze, ayo akafuridzirwa neyakajairika eSwiss makomo makabati kupa zvese zvese kuwanda. Mune imwe neimwe mudanga mune maartisan anoratidza zvigadzirwa zvavo kuti tiwane zvipo zvakanaka uye zvakasarudzika. PaClaraplatz zvakare zvinokwanisika kuwana gastronomic zvigadzirwa, kune vanoda chikafu.
MuBrussels vanogara Krisimasi muchitaera, saka vanhu vazhinji uye vanouya kuguta gore rega rega kuti vafarire mazuva aya nenzira yakasarudzika. Mhemberero dzakaitwa panguva ino dzinodaidzwa kuti Plaisirs d'Hiver, kupa zita ravo kunhamba huru yezviitiko uye zvinoratidza izvo zvinoitika. Iyo Musika weKisimusi unobhabhatidzirwa WinterWonders, nezvinoita sekunge tinotamira kune yekufungidzira nyika. Iwo musika unotenderera nzvimbo dzakasiyana dzeguta, nematumba maunogona kutenga zvinhu. Ivo vari paGreat Place, pamwe chete nemuti muhombe weKisimusi, paPeace de la Monnaie, paPazza Santa Catalina padhuze negumbo hombe reFerris kana munzvimbo yepakati yeBourse. MuKunakidzwa kwevana vadiki nzvimbo, mhuri dzinogona zvakare kuwana varaidzo kune vadiki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Kufarira » Misika yakanakisa yeKisimusi
Madrid metro nzvimbo
Muromo weChokwadi, yechinyakare yeRome